Biyya Netherlands/Holand keessattis Embaasiin uggurame. – Kichuu
HomeNewsWorldBiyya Netherlands/Holand keessattis Embaasiin uggurame.
Embaasii ugguruun itti fufa! Bakka jirtan maraa cufsiisaa!
Qeerroon UK mootummaa Itoophiyaa boochisaa jirti. Dhimmi Hajaa Alaa Itoophiyaa uggura Embaasii ilaalchisee mari’ataa jira jedhan. Sagaleen keessan sirriitti dhagayamee jira. Bakka jirtanii yaa’aa uggura kana itti jabeessaa!
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)Bakka buutonni mana maree Yunaaytid Isteets 20 tasgabii-dhabinsa Itoopihyaa keessatti dhiheenya uumame irratti yaaddoo guddaa qabna, jechuudhan ministira haajaa alaa Yunaaytid Isteets Mike Poompiyootti xalayaa barreessan.